D Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim…… Waxa Qoray Khaalid Jaamac Qodax | Sagal News
D Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim…… Waxa Qoray Khaalid Jaamac Qodax
August 2, 2017 - Written by admin
Buuggani waxa uu i xasuusiyey waagii aan dugsiga hoose/dhexe ku jirey buugaag tiro badnayd oo Muqdisho laga keeni jirey oo ka ugu badani ka koobnaa toban bog, kana hadli jirey uun jacayl, nabsi iyo arrimo dhallinyaro oo aad u tayo liitey. Buugganna waxa iiga baxay in qoruhu uu hadda taagan yahay (waxaan ujeedaa dhanka waayo aragnimada qoraalka e) halkii ay qorayaashaa reer Muqdisho xilligaasi marayeen markaad dhugato arrimaha uu ka hadlaayo.
Buugga cidhifyadiisu ma xidhna ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo “Margins”, taasi oo buugga fool xumo weyn u keentey. Haddii aad akhriste aragto buugga waxa aad fahmeysaa in degdeg iyo iga gaadhsii buugga lagu daabacey, ee aan loo eegin karti, dedaal, kana buuxdo hubsimo la’aan baahsani. Kaaga sii darane farshaxannimada buugga ee ku dhex dhimatey waxa aad ugu tageysaa tusmada oo iyadana si macmal ah loo qorey, oo aad fahmeyso in gacanta si qiyaas ahaan ah loogu qorey. Hadda ila garo oo Koombiyuuterka ayaa u fududeyn lahaa arrintaasi. Kaaga sii darane waligey inta aan buug akhrinaayey, ama aan arkaayey kuma arkin buug ereyga “Tusmada” ahi ay ku dhex jirto isla tusmadii. Waa yaab! Iyo yaabka yaabkiise, arrintani maxay ka tahay qoraha? Intii aan buugga loo gudbin daabacaadda, waxa dhaqaaqey bogaggiisa, taasi oo meelo badan ka muuqata. Cinwaan ama bog cusub oo hoosta bogga ka bilaabmaya ayaad meelo badan ugu tegeysaa buuggan, taasi oo buuggii ka dhigtey mid qaabdaran.
Qoraha buuggani hore iyo dambeysaba innalama uu wadaagin in sheekooyinkani yihiin khayaal uu maskaxdiisa ka curiyey iyo iney yihiin dhacdooyin dhab ah oo isaga ku dhacey. Midkey doontaba ha ahaatee, waxa hubanti ah in ay gef weyn ku tahay xeerarka ay ku dhisan tahay sheeko faneeddu in afkaarta qoraha sheekada oo mutaxan si badheedh ah loogu dhex arko. Taasi oo sheekadii ka dhigeysa ama u rogeys maqaal dhacdo laga qoray. Maxaa magaca qoraha meeshan keeney? Inuu buuggan qorey yuu u sheegayaa? Sheekadu wakhtiga ay dhacdey iyo buuggani aminta uu soo baxay maxaa iska galay? Ma sheekaa, ma ………….?